Universal-ny endrika sy ny habeny dia natao ho an'ny ankamaroan'ny fiara, kamiao, vans sy SUVs. Hety ihany no ilainao hanapahana ny endriky ny gorodon'ny fiaranao. Azonao atao ny mametraka ny cushion nefa tsy misintona ny lamosinao.
Universal-ny endrika sy ny habeny dia natao ho an'ny ankamaroan'ny fiara, kamiao, vans sy SUVs. Hety ihany no ilainao hanapahana ny endriky ny gorodon'ny fiaranao. Azonao atao ny mametraka ny cushion nefa tsy misintona ny lamosinao. Mandehana fotsiny ny kofehy mandra-pahitanao ny haingo tonga lafatra!
Fampisehoana mandroso-Ny fandrafetana polymère fingotra dia nosedraina tao anatin'ny fepetra faran'izay mafy mba hahazoana antoka fa tsy mivaky, mivaky na mivadika. 100% polymer avo lenta tsy misy fofona, ny footpad dia tsy misy fofona ary tsy misy poizina bisphenol A. Ny fiara dia tsy ho voan'ny simika manimba sy fofona tsy mahafinaritra. Na dia mihidy amin'ny mari-pana ambony aza ny varavarana dia tsy misy fofona miavaka, ka ny mpandeha rehetra dia azo antoka rehefa miditra ao anaty fiara (tsy mila ventilation)!
Tsy tantera-drano-Fanamboarana tsy manam-paharoa Ny havoana tsipika sy diagonaly dia apetraka amin'ny toerana stratejika ao anatin'ireo lovia lalina amin'ireo tsihy ireo mba hanamafisana ny fahaizany misambotra. Ny rano, ny lanezy, ny fotaka ary ny potipoti-javatra dia voafehy ary tsy hitsoaka na hiditra ao anaty fiara. Anti-slip grip-ny fingotra dia mipetaka eo amin'ny farany ambany, noho izany dia mijanona eo amin'ny toerany foana ny cushion-ny ergonomic groove dia eo an-tampony, izay hanome ny tongotrao sy ny fampiononana bebe kokoa.
Ny gorodona fingotra amin'ny vanim-potoana rehetra dia afaka miaro ny gorodonao amin'ny fiaranao amin'ny fitaoman'ny dette sy ny korontam-bato; Ny lamin'ny fanitsahana lalindalina kokoa dia afaka mametraka rano, ranomandry ary fotaka; Ny gorodona anti-slip splint dia afaka mitazona ny toeran'ny gorodona amin'ny toetr'andro ambany: ny akanjo gorodona dia natao mba hahatonga azy ho mety amin'ny fiara rehetra; Izy ireo dia natao mba hahazoana antoka fa tsy hikorontana na hikorontana na hihamafy ny tsihy ao anatin'ny toetr'andro ambanin'ny zero: mitazona ny seza anoloana sy aoriana amin'ny fiara ho madio mandritra ny fotoana maharitra, ary ampitao amin'ny tsihy mavesatra isan-karazany; Arovy ny tany am-boalohany amin'ny bozaka sy loto maharitra: ny tsipiriany rehetra amin'ny fiaranao dia tokony ho tonga lafatra; Azafady, jereo ny lamba fanadiovana anatiny sy ivelany, kitapo fanasan-damba sy savoka, fitaovana fiarovana, foam pneu, fikarakarana lens sy fitaratra, mpanadio rivotra.
teo aloha: Fiara Electrostatic Film Side Block
Manaraka: Fonon'ny seza fiara dimy
Mats gorodona mangatsiatsiaka ho an'ny fiara
Mats gorodona amin'ny fiara